YEYINTNGE(CANADA): Saturday, October 23
23 Oct 2010 ဒိုင်ယာရီ
23Oct 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/23/20100အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များရဲ့ သံလျင်ကျောက်တန်း ခရီးစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့်၊ ဦးခင်မောင်ရှိန်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ လူငယ်တာဝန်ခံ (၁) ကိုမျိုးညွန့်နဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များဟာ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် မနက်ပိုင်းက သန်လျင်နဲ့ ကျောက်တန်းမြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ မိသားစုဝင်များနဲ့ တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ကာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပြီး အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့သလို မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ တွေဆုံမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးနဲ့ မြို့နယ် ရပ်ကွက် ကျေးရွှာ အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးတို့ဟာ ဈေးအစရှိတဲ့ လူစည်ကားရာ နေရာများမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံများနဲ့အတူ လူတိုင်း မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသလို၊ မဲမပေးပဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စာရွက်များ ဝေငှခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ပြုလုပ်မှုကို နယ်မြေ အာဏာပိုင်များက တစုံတရာ ဟန့်တားမှု မရှိပေမယ့် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ စာရွက်ဝေပြီးတဲ့နောက်မှာ လက်ခံရရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုထံမှ စာရွက်များကို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းတဲ့အခါ ပြည်သူအချို့က ကြောက်ရွံ့ပြီး ပြန်ပေးလိုက်သော်လည်း အချို့တော့ ဝေထားပြီးသား စာရွက်တွေ ပြန်ပေးစရာ အကြောင်း မရဘူးလို့ ပြန်လည် ပြောဆိုကြခဲ့ကြောင်း မဲမပေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တဦးက ဆိုပါတယ်။
အခု လှုပ်ရှားမှုဟာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ဥပဒေအရ မဲမပေးပဲ နေနိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ တီရှပ်အင်္ကျီများ ဝတ်ဆင်ကာ မဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက လူငယ်များကလည်း I VOTE (မဲ ပေးမယ်) လို့ ရေးထားတဲ့ တီရှပ်များ ဝတ်ဆင်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့ လူစည်ကားရာ နေရာများမှာ သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့မှုများ ရှိခဲ့ရာ အာဏာပိုင်များမှ တစ်စုံတစ်ရာ နှောက်ယှက် ဟန့်တားခြင်း မရှိသလို စစ်အစိုးရအာဘော် ကြေးမုံ အွန်လိုင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှုဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း မြန်မာပြည်သူများ ပိုမို နားလည် သဘောပေါက်လာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(သတင်း - ဓါတ်ပုံ - ဒီမိုဝေယံ)
ဖရီးဘားမားကမ်ပိန်း(စင်္ကာပူ)ကနေ ဦးဆောင်ပြုလုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲ
Speakers’ Corner on Saturday, 30 October 2010
to say “NO TO BURMA’S SHAM ELECTIONS” .
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ- အပိုင်း ( ၄ ) ”
﻿" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ- အပိုင်း ( ၄ ) ”
(မောင်မောင်ဝမ်း) 0ct 22,2010
ကျနော်တို့ဟာ သာမန်ပုထုဇဉ်လူသားတွေပါ။ စိတ်ဆိုးတတ်ပါတယ်။ပျော်တတ်ပါတယ်။ ခံစားတတ်ပါတယ်၊တုန့်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အန်တီစုတို့လို သူ များအတွက်ကတော့ ဦးနှောက်နဲ့တွေးခေါ်လုပ်ကိုင်မှု့ဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ နှလုံးသားခံစားမှု့ကို အသား သွားပေးလို့ မရနိုင်ပါဘူး၊ (သို့သော် ပစ်ပယ်လို့တော့ မရကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။) ခံစားမှု့အရ နာကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကလည်း နာကျင်မှု့အတိုင်း တုန့်ပြန်ခဲ့တာ အမှန်တစ်ခုပါ။ ထို့အတူ ခံစားမှု့ကို ဘေးမှာထား၊ လိုအပ်ချက်ကို ရှေ့တန်းတင်လုပ်နေရတဲ့ အန်တီစုလို ခေါင်းဆောင်များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်း အမှန်တစ်ခုပါပဲ။
”စိတ်ကူးနဲ့တောင် တော်တော်မြိန်တာပဲ ။” ဒီလိုပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါက ကျနော်တို့ရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်တွေပါ၊ သို့သော် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ---------------------------
﻿ တနေ့ အန်တီ့ ခြံရှေ့ ဟောပြောပွဲမှာ မေးခွန်းလေးတစ်ခု တက်လာပါတယ်။ (အန်တီ့အိမ်ရှေ့မှာ စာတိုက်ပုံးလေး ထားပေးပါတယ်။ မေးခွန်းမေးလိုသူများက စာရေးပြီး အဲဒီထဲ ထည့်ထား၊ အဲဒီထဲကမှ သင့်တော်တဲ့မေးခွန်းတွေကို အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်းမှာ အန်တီက ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။)
အန်တီစုရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ ပြုံးရွှင်နေပါတယ်၊ နှစ်လိုဖွယ်ရာ အပြုံးလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် မမှားနိုင်လောက်ပါဘူး။
လက်ခုပ်တီးသံတွေ၊ သြဘာပေးသံတွေ ဆူညံသွားပါတယ်။
ဒါဟာ အန်တီစုရဲ့နှလုံးသားကြားက ယိုစိမ့်ထွက်လာတဲ့ အစစ်မှန် စကားလုံးတွေပါ။
“ အန်တီပြောခဲ့တဲ့စကားက တကယ်ပဲပေါ့ ။” ဆိုတော့ ... “ တကယ်မို့လို့ အန်တီပြောတာပေါ့ ”..တဲ့။ ”အန်တီ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ လူကြီးတွေကိုပဲ သားတို့လေ့လာလိုက်ဦးလေ ၊ ဘဘ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးကြည်မောင်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးလွင် ..အားလုံးဟာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေချည်းပဲ ။ဘဘ ဦးတင်ဦးဆို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်တောင် ယူခဲ့ရသေးတာ။ နောက်ဆုံး ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့် ။( ဦးဝင်းထိန်ကို လှည့်ပြီး ညွှန်ပြလိုက်တယ် ။) တပ်မတော်က အရာရှိဟောင်းတစ်ဦး။ အန်တီတပ်မတော်သားတွေကိုမုန်းတီးရင် သူတို့နဲ့ဘယ်လက်တွဲလိမ့်မလဲ ”
သိပ်မှန်တဲ့စကားပါ။ အန်တီ့ကို ၀န်းရံနေသူတွေ၊ ပါတီထဲက ခေါင်းဆောင်တချို့ဆို စစ်တိုင်းမှုးဟောင်းတွေတောင် ပါပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေထဲက တစ်ယောက်က လက်ရှိတပ်မတော်အတွင်းက အောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့အခက်အခဲ၊ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှု့တွေကို ပြောပြတဲ့အခါ အန်တီ ရဲ့ရင်ထဲမွန်းကြပ်သွားပုံရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မျက်နှာလေးဟာ ညျိုးရော်လို့-----------။
“ လက်ရှိစစ်တပ်အတွင်းက တပ်မတော်သားတွေရဲ့ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှု့တွေကို ကောင်းကောင်း မဖြေရှင်းပေးတာဟာ …. မကောင်းဘူး ။”
ဦးတင်ဦးက “ တပ်ရဲ့အကြီးအကဲဆိုတာ ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘပဲ…. အစစအရာရာ တာဝန်ရှိတယ် ….. မလိုအပ်ဘဲနဲ့ တပ်မတော်ကို တိုးချဲ့နေမယ့်အစား … လက်ရှိအနေအထားကို အရည်အသွေးပြည့်မှီအောင် လုပ်သင့်တယ်…. ခေတ်မှီတပ်မတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လူတွေစုနေရုံနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး…….အခုဟာက တပ်က ခေတ်မှီတပ်မတော်ဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ… စားဝတ်နေရေးဖူလုံဘို့တောင်… မလွယ်ကူတဲ့ အခြေနေဆိုတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။”
ဒီလိုနဲ့ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အန်တီရဲ့ ရင်ထဲကရိုက်ခတ်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာ နအဖ ထိပ်တန်းအပါအ၀င် တပ်မတော်သား တော်တော်များများ နားထဲကို စိမ့်ဝင်သွားစေခဲ့ပါတယ်-----------။
﻿ သိပ်မကြာခင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့ လူသိထင်ရှား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု့နဲ့ တုန့်ပြန်သံကို ကြားလာရပါတော့တယ်။
ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်က လွဲလို့ ဘယ်သူသိနိုင်လိမ့်မလဲ။
(ကျနော်ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရတုန်းက တပ်ရင်းမှုးတစ်ယောက်လည်း ပြစ်မှု့တစ်ခုနဲ့ထောင်ကျ လာပါတယ်။ သူနဲ့ ကျနော်ခင်မင်သွားတဲ့ အခါ သူ့က တနေ့ သူ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထဲက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်။ အန်တီက ဖော်ပြပါ မိန့်ခွန်းကို တိုင်းသိပြည်သိ၊ကမ္ဘာသိ ပြောကြားလိုက်တဲ့အခါ တပ်ထဲမှာ ” တော်တော်ဂယက်ရိုက်သွားကြောင်း ၊ စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဟာ တပ်ရင်းအသီးသီးကို ရောက်ရှိလာပြီး ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက် မိန့်ခွန်းကို မယုံကြည်ကြဘို့ ” စည်းရုံးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကြားလိုက်ရပါတယ်။)
တနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင် ၊ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးတင်ဦး ၊ ဦးကြည်မောင် ၊ ဦးလွင် စတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့ကျောင်းသားများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့က တွေ့ဆုံပေးဘို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းကြောင်းကို စတင်အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အကြံဥာဏ်တောင်းခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်က စလုပ်ကြမလဲ။ တကယ်တော့ တဘက်နအဖ နဲ့သင့်မြတ်ဘို့ကို အသာထားလို့ ..ကိုယ်ချင်း သင့်မြတ်ရေးကို ဦးစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတော့တယ်။
﻿ဒီလိုနဲ့ ပထမဦးဆုံး ကျနော်တို့ကျောင်းသားများဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ( ဒီ/ငြိမ်း ) နဲ့ အရင်ဆုံး တွေ့ဆုံသဘောတူညီချက်ရအောင် ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ တနေ့ ကျနော်တို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှုးအောင် အိမ်ကို ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်မှုးအောင်နဲ့လည်း အခန့်သင့်စွာပဲ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကြောင်သွားကြတယ် ။ တော်တော်လည်း အကြပ်ရိုက်သွားပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ အမျိုးမျိုးဖြောင်းဖျကြတယ်။
“ ဘဘ ကျနော်တို့တင်ပြချက်တွေကို နည်းနည်းလေးလောက်တော့ အသိမှတ်ပြူပေးပါ .. ဒီနေ့အချိန်အခါမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာ အရမ်းကို လိုအပ်နေပါတယ်….. သင့်မြတ်ဘို့လိုပါတယ်…. ဘဘတို့လို အစဉ်လာရှိတဲ့ လူကြီးတွေ နဲ့ အန်တီနဲ့မှ မသင့်မြတ်ကြဘူးဆိုရင် ရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်သွားကြမလဲ”
ကျနော်တို့အားလုံး ၀မ်းနည်းသလို ခံစားသွားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းမှာတင် ဦးကျိုးသလိုများ ဖြစ်နေပြီလား ၊
ဒါပေမယ့်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်ရမယ်..ဆိုတဲ့ သဘောတရားကတော့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေဆဲပါ။
“ ဘဘ နောက်ဆုံးအခွင့်ရေးလေးတစ်ခုတော့ပေးပါ ……. ဘဘတို့ ဘာတွေ မကျေနပ်သလဲ … ကျနော်တို့ကို ရင်ထဲရှိတာတွေပြောပါ…… ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းလို့ရမယ်ဆို အန်တီနဲ့ ညှိနှိုင်းချင်ပါတယ် ”
” အန်တီက အားလုံးသင့်မြတ်ရေးကို အလိုရှိပါတယ်…။ ယုံပါ ဘဘ ”
“ ငါတို့ အားလုံးလည်းကြားပါတယ်….. အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာ တို့နိုင်ငံအတွက် အရမ်းကိုလိုအပ်ပါတယ်….. ဒါမရှိဘဲနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ဘို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သလိုပါပဲ ။ သမင်မွေးရင်း...ကျားစားရင်းဖြစ်နေမှာပဲ…။ ဆက်မွဲဦးမှာပဲ ”
“ ခက်တယ်ကွာ … ငါ့စေတနာကိုလည်း .. နားမလည်ဘူး … စော်ကားတယ် …. သူတင် က မလားကွ… သူ့အမေ ဆို ပိုတောင် ဆိုးသေးတယ်။” ( ဒေါ်ခင်ကြည်ကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။)
“ပြောမယ် ။… ဒီလို …၊ ဦးစောက (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သူက) မင်းတို့ သမိုင်းမှာ သိတဲ့အတိုင်း လက်နှက်တိုက်ကနေ လက်နှက်တွေထုတ်သွားရာက အစ.. ကိုအောင်ဆန်းကို လုပ်ကြံမယ်..ဆိုတဲ့ သတင်းကို ငါတို့ အတိအကျရထားတယ်ကွာ..။ ဒီကြားထဲမှာ ဘဆွေ (စာရေးဆရာ ရန်ကုန်ဘဆွေ) ကလည်း ကိုအောင်ဆန်းအပေါ်မှာ သိပ်ကလိမ်ကျနေတဲ့ ၊ မနာလိုနေတဲ့ ဦးစောကို ကြည့်မရဖြစ်ပြီး ၊ (ကိုအောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံမခံရခင် လပိုင်းလောက်မှာ ) သေနတ်နဲ့သွားပစ်တယ်ကွာ..။ စဉ်းစားကြည့်ပေတော့.. ။ နဂိုကမှ ဦးစောက ကိုအောင်ဆန်းကို မလိုနေရတဲ့ အထဲ ပိုဆိုးသွားပြီပေါ့……..။ အကောက်ကြံပြီပေါ့ ။ဒါတွေကို ငါတို့က အတိအကျ သတင်းရတယ် ။ ဒါနဲ့ တနေ့ မဖြစ်ချေဘူး..ဆိုပြီး မနက်စာတောင် ထမင်းမစားနိုင်ဘူး ။ ငါ ကိုအောင်ဆန်းဆီ အပြေးသွားခဲ့တယ်….။ အဲဒီနေ့က ကိုအောင်ဆန်းကလည်း အိမ်မှာ အဆင်သင့်ကွ ။ ဘယ်မှ မသွားဘူး ။အိမ်မှာ အနားယူနေပုံရပါတယ်။ ငါ မှတ်မိသေးတယ် ။ စွပ်ကျယ် လက်စက လေးနဲ့ ...။ ငါရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ-----သူက...
“ ဘာဖြစ်ရမလဲ … ခင်ဗျားကို.. သတ်တော့မယ်….။ အဲဒါ.. ဂရုစိုက်ဦး…. ကျုပ်လာသတိပေးတာ…။ သတင်းတွေ အတိအကျ ရထားပြီးပြီ ။”
ကိုအောင်ဆန်းက ရီတယ် ..ကွ။ ဒီလူကလည်း တမျိုးကွာ။
“ မုန်းတာ မမုန်းတာထက် ခင်ဗျားကို လုပ်ကြံဘို့ကြိုးစားနေတာတော့ အသေအချာပဲ။ ဒါဆိုလည်းပြီးတာပဲ… ကျုပ်တာဝန်ကျေတယ်နော်…။
ငါ့စိတ်ထဲနည်းနည်းတော့ ကသိကအောင့်ဖြစ်မိတယ် ...အမှန်ပြောမယ်၊ ငါ သူသေမှာ ကြောက်တာ အမှန်ပဲကွ။ ငါ သေရမှာတောင် ငါမကြောက်ဘူး၊
သူသေရင် ရှုပ်ကုန်မှာတွေ တပုံကြီး၊ သူကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ အဲဒါငါသိတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ငါ ဗိုက်ကလည်း ဆာလိုက်တာမှ ကွာ..။ အဲဒါကို ကိုအောင်ဆန်းက ရိပ်မိသွားသလားမသိဘူး----။
မင်းတို့ စဉ်းစားကြည့်ကွာ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ။ ငါက စေတနာနဲ့ သူ့အိမ်အထိ လာပြောကိုတောင်မှ ငါက အငတ်ကြနေတာပဲ။ ထမင်းကို တိုင်းချက်ထားတာ...တဲ့ ၊ မသကာ ထမင်းတစ်အိုးတည်တော့ရော ဘယ်လောက်ကြာမှာမို့လဲ။
သူ့သမီးကျတော့လည်း ငါတို့ကို သူ့အဖေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကို လေးစားရိုသေရမှန်းမသိ …။ ပြောရရင်အများကြီးပါကွာ….။
ဗိုလ်မှုးအောင် သူပြောချင်တာတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောလိုက်ရလို့ စိတ်ခံစားမှု့တွေ ပြေပျောက်သွားတဲ့ ပုံ ကျနော်တို့တွေ့လိုက်ရတဲ့ အခါ….ကျနော်တို့ စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။ သူ့ရဲ့ရင်ထဲအစိုင်အခဲတွေဟာ ထုတ်ပြောလိုက်မိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့အတူ လွင့်ပါသွားလေသလား ဖြစ်နေချိန်မှာ…….
ကျနော်တို့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။ ဗိုလ်မှုးအောင်ကို အားလုံးက ၀ိုင်းကန်တော့ကြပြီး ကျနော်တို့တတွေ အန်တီခြံကို အပြေးကို ရောက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။
အန်တီက တခြားသူတွေနဲ့တွေ့နေလို့ ကြာနေတဲ့ အချိန်တွေတောင်မှ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဘူး၊ တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးလို့...ထွက်လာလာခြင်းပဲ ကျနော်တို့ ရဲ့ ပွဲဦးထွက်အောင်မြင်မှု့ကို အားပါးတရပြောပြလိုက်တော့ အန်တီရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေနဲ့……………..။
“ ဘဘတို့ကို ပြောလိုက်ပါ… လူကြီးတွေက အန်တီ့ဆီ မလာပါနဲ့။ မသင့်တော်ပါဘူး ။အန်တီက အငယ်ပဲ… ။အန်တီက လူကြီးတွေရှိရာကို အရောက်လာပါ့မယ်လို့ ...။”
ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ ဗိုလ်မှုးအောင်တို့ဆီကို အကြောင်းပြန်ရပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို သဘောတူခဲ့ပြီး .. အန်တီက ဗိုလ်မှုးအောင်အပါဝင် ဒီငြိမ်း အဖွဲ့ဝင် လူကြီးများကို သွားရောက် ဂါရ၀ပြူခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်မှုးအောင်ဟာ နောက်ဆုံး သေသည်အထိ ကတိတည်စွာ အန်တီစုကိုဝန်းရံပေးခဲ့ပါတယ်။ အန်တီနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တဲ့ အခါမှာတော့ အန်တီက ကျနော်တို့နဲ့ ဗိုလ်မှုးအောင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အသံဖမ်းတိတ်ခွေကို နားထောင်ပြီးပြီမို့-----
﻿ တနေ့ ကျနော်တို့ အန်တီစုနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါ ပြောမိတာက----
”ဒါပေမယ့် ...ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဦးစောကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေမယ့် နောက်ဆုံး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုသာ ခံလိုက်ရတယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ် မသွားရှာဘူး။ ဒါကိုကျတော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ။” ဆိုတော့ ……အန်တီရဲ့တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့ .. ခပ်ဆိတ်ဆိတ်လေး နားထောင်နေရှာတယ်။
ကျနော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နှလုံးသားပုံရိပ်များ ရသဆောင်းပါး ကိုအပိုင်းလိုက်ရေးသားတင်ပြနေသည်မှာ ယခု အပိုင်း ၄ သို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကာလများတွင် စာဖတ်ပရိပ်သတ်များထံမှလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆို သံများကိုထင်ဟပ်ထားသည့် အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိပါသည်။ ထို့အတွက်များစွာမှကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ရောက်ရှိလာသော အီးမေးလ်များထဲမှ ကျနော့်အား ခြိမ်းခြောက်ထားသော မေးလ်အချို့ကိုလည်း လက်ခံရရှိပါသည်။ ( နအဖ ) နှင့် သူ၏ဘက်တော်သားများလို့ယုံကြည်ရပါသည်။ ဆဲဆိုသံများနှင့်အတူ -- မအေ (---- )- ပြည်ပြေး ဗမာပြည်ပြန်လာရင် သေဘို့သာပြင် ၊ --- မင်းညီမကို သူ့သားတွေနဲ့ပေးစားလိုက်ပါလား--- စသည်ဖြင့် ဒီထက်ရိုင်းတာတွေလည်းပါ ပါသည်။ ထူးခြားသည်မှာ မေးလ်များကြားမှ မ်ိမိ ဒီမိုကရက်တစ် အတိုက်အခံ အင်အားစုလို့ယုံကြည်ရတဲ့ မေး သုံးစောင် လက်ခံရရှိပါသည်။ အကြောင်းအရာများကိုခြုံ၍တင်ပြရလျှင်----
- မင်းက ဘာကောင်မို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းရေးရတာလည်း
- မင်း သမိုင်းကြောင်းကိုမြေလှန်မယ် ( လှန်နိုင်ပါသည်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ လှန်ဘို့တော့လိုပါလိမ့်မည်)
- ကျနော့် အမျိုးသမီးအားလည်း ရစရာမရှိအောင်ပုတ်ခတ်ဆော်ကားထားချက်များပါဝင်ပါသည်။ ဘာ့ကြောင့် အတိုက်အခံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု ဘက်မှဟုယုံကြည်မိသလည်းဆိုရင်- စာပါ အကြောင်းအရာတချို့မှာ ကျနော် ဘာပဲလုပ်လုပ် မနာလိုဝန်တိုမှု့ဖြင့် အမြဲတိုက်ခိုက်နေသော အုပ်စုလေသံများဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိစ္စမရှိပါ။ စာပါအကြောင်းအရာများမှာလည်း ကျနော့်အား မနာလိုဝန်တိုမှု့ဖြင့် လုပ်ကြံပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ထားသောအကြောင်းအရာများပဲဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး အပိုင်း များကို ရေးသားတင်ပြနေမယ်ဆိုရင် - သူတို့ အနေနဲ့ ကျနော့်အား တိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းခြိမ်းခြောက်ရေးသားလာပါသည်။ နအဖမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားအပြင်းအထံတိုက်ခိုက်နေချိန်တွင် ( ကျနော်၏ရည်ရွှယ်ချက်မှာ အထူးသဖြင့် ယနေ့လူငယ်များ အန်တီစု၏ပုံရိပ်များကိုခံစားမိရင်း စိတ်ဝင်စားစေလိုသော၊အတုယူစေလိုသော၊ အားကြစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တင်ပြရေးသားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် အပြစ်ဟုယူဆပါလျှင် ကျနော့်မှာသာလျှင်တာဝန်ရှိပါသည်။ ရေးစရာရှိတာကိုတော့ ပရိပ်သတ်များလက်ခံနေသည်အထိ ဆက်လက်တင်ပြရေးသားပါမည်။ အပုတ်ချတိုက်ခိုက်လိုသူများ တိုက်ခိုက်နေသည့်တိုင် လုံးဝရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နှလုံးသားပုံရိပ်များ ရသဆောင်းပါး အပိုင်းလိုက်ပြီးဆုံးပါက - ( မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ )ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အပိုင်းလိုက်ဆက်လက်တင်ပြရေးသားပါမည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များရဲ့...
ဖရီးဘားမားကမ်ပိန်း(စင်္ကာပူ)ကနေ ဦးဆောင်ပြုလုပ်မယ့် ...